site ha na 20-10-26
The 2020 Golden Festival n'oge ejiji nwoke na nwanyị, uwe na akpụkpọ ụkwụ, gụnyere uwe elu, sneakers, ugogbe anya anwụ na ego ndị ọzọ na uwe, akpụkpọ ụkwụ na ngwa Chọta oge ejiji kachasị mma, uwe na akpụkpọ ụkwụ na Amazon Prime Day, nke gụnyere Kacha ...
site ha na 20-10-19
Akuko "Global Sports Bicycle Eyewear Market" na-enye isi onu ogugu banyere onodu ulo oru a ma buru uzo bara uru nke nduzi na ntuziaka maka ulo oru na ndi mmadu nwere mmasi na ahia. The nnyocha akụkọ na egwuregwu igwe kwụ otu ebe iko na-agụnye ndị na-akwọ ụgbọala ...
Dị Ugogbe Anya Anya Do Chọrọ Iyiri n’Ọdịnihu?
N'otu oge, anyị niile nwere mmetụta na ụmụ agbọghọ buru ibu bụ iko na-atụ ụjọ, na-enwe mmetụta nzuzu na enweghị ọchị. Otú ọ dị, na-adịbeghị anya, ọtụtụ isi flyover ụdị akwado ha, na iko na onye ọ bụla na-enweghị mmasị na mberede ghọrọ ejiji ihe na ghọrọ a ne ...
Ugogbe anya anwụ aghọwo otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'okporo ámá. I ka choputara ugogbe anya na ugogbe anya? Mgbe ị na-eme njem n'okporo ámá, ihe nchebe anya bụ ugogbe anya maka anwụ. N'oge na-adịbeghị anya, ejiji nke okpokolo agba na-enweghị ntụpọ ka ejiri nwayọ fụọ na ụlọ ọrụ ngwa. Nke a ...
N'uche ndị mmadụ na-ewu ewu, ugogbe anya maka anwụ bụ "ngwa ngwa n'oge okpomọkụ", mana ị maara?
site ha na 20-08-28
N'uche a ma ama, ugogbe anya maka anwụ bụ "ngwa ngwa ọkọchị", mana ị maara? Egwuregwu Ultraviolet n'oge oyi na-emerụkwa anya. Ọbụna n'ụbọchị igwe ojii, UVA na UVB ga-erute n'anya gị. N'ezie, anya anyị na-esighi ike ma na-emebi emebi n'oge oyi. N'otu aka, b ...
Ugogbe anya maka anwụ nwekwara “ndụ”
Iji họrọ ugogbe anya maka anwụ kwesịrị ekwesị, a ga-eburu ndụmọdụ ndị a dị mkpa n'uche: nchedo UV: Họrọ ugogbe anya maka anwụ nwere ike igbochi 99% ~ 100% UVA na UVB radieshon. Igwe ugogbe anya: nha ugogbe anya ugogbe. Ugogbe anya ugogbe anya maka ugogbe anya na-ekpuchi otutu uzo ma nyere aka belata t ...
Igwe ugogbe anya, dị ka ụdị ugegbe na-ekpuchi anwụ, bụ nke ngwaahịa nchekwa mmadụ. Isi ọrụ nke ugogbe anya maka anwụ bụ igbochi mgbakasị na mmebi nke ụzarị ultraviolet nke dị na mpụga na anya mmadụ ma nye gburugburu ebe obibi dị mma. Enweghị ezigbo prot ...